Kuuriyada Waqooyi oo Gantaal Kale Dul Marisey Hawada Japan. | ogaden24
Kuuriyada Waqooyi oo Gantaal Kale Dul Marisey Hawada Japan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa jawaab ka bixisey cunno qabetyntii lagu soo rogey todobaadkan. Gantaal laga ridey caasimadda dalkaas ee Pyongyang ayaa dul marey hawada sare ee dalka Japan, ka hor inta aanu ku dhicin Badda deggan ee Pasifikada. Sida laga soo xiganayo dalka Japan gantaalku wuxuu dusha ka marey hawadooda sida uu sheegay telefishanka NHK.
Gantaalka ayaa la ridey saacaddu markey ahayd 06:57 daqiiqo waxaana uu dusha ka marey jasiirada Hokkaido ee Waqooyiga Japan saacaddu markey ahayd 07:06 sida ay ku warantey Reuters. Gantaalka ayaa ku degey meel 200mil u jirta Jasiiradaha Japan ee Erimo iyo Hokkaido.
Dowladda Japan ayaa canbaareysey gantaalka dul marey hawadeeda, waxaana ay ku dhawaaqdey in ay difaaceyso dadkeeda. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey (QM) ayaa isgu imaanaya shir deg-deg ah, waxaana gantaalkan cusub canbaareeyey qaar kamid ah hoggaamiyaasha caalamka oo uu welwel cusub ku abiiray.
Waa markii labaad ee maamulka Pyongyang ay gantaal dul mariyaan dalka Japan, muddo laba todobaad gudahood ah. Tijaabadan ayaa imaanaysa maalmo kadib markii QM cunno qabateyn ku soo rogeen dalka Kuuriyada Waqooyi. Safiirka Pyongyang u fadhiya QM ayaa sheegay in cunno qabateyntaas Maraykanku aad uga xanuunsan doono.
Madaxweynaha Ruushka ayaa horey u sheegay in cunno qabateyntu ay xaaladda uga darayso ee wada hadal arrinta lagu xaliyo.